Global Voices teny Malagasy » “Avy amin’ny fomba fijerin’ny andrim-panjakana sy ny Fanjakana ny teny hoe ‘indizeny’ “ · Global Voices teny Malagasy » Print
“Avy amin'ny fomba fijerin'ny andrim-panjakana sy ny Fanjakana ny teny hoe ‘indizeny’ “
Voadika ny 05 Jona 2018 4:45 GMT 1	 · Mpanoratra Sebastián Terán Nandika Liva Andriamanantena
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fandaharana isan-kerinandro “Descolonizar el Coco ” ao amin'ny Wambra Radio  any Quito, Ekoadaoro i Sebastián Terán. Dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiaa nataon'i Sebastián momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “indígena” (indizeny) ao anatin'ny tontolon'ny Ekoadaoreana ity manaraka ity.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 1.599 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “indígena” (indizeny) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa )
Ahoana ny momba ny zavon-teny nahasarika anao indrindra?
Aseho avy amin'ny fomba fijerin'ny andrim-panjakana sy ny Fanjakana ny teny hoe ‘indizeny’, indrindra amin'ny fotoan'ny fifidianana izay hanatanterahana ny fepetra demokratika, ny fiaraha-miasa ary ny fandraisana anjara. Izany no mahatonga antsika mahita ny teny toy ny hoe ‘filoha,’ ‘fikambanana,’ ‘governemanta,’ ‘firenena,’ ‘mpitarika,’ ary ‘ CONAIE ‘ (Ny Konfederasionan'ny Zom-pirenena Indizeny ao Ekoadaoro).
Araka ny zavon-teny, ahoana ny fomba hanehoana ny “indizeny” ao amin'ny fampitam-baovao?
Zavatra mety tsy ho takatry ny olona iray izany satria izy io dia fanehoana mihataka sy lavitra momba ny vahoaka tompotany izay tena azo tsapain-tanana indrindra amin'ny zava-misy marina momba azy ireo – ny sehatra misy azy ireo manokana, ohatra ny tolona ataony, ​​ny olana momba ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny diabe na ity fifandraisana lalina amin'ny tany ity izay tsy tafiditra [amin'ny zavon-teny] na tazana avy lavitra .
Inona avy ireo teny tokony hananan'ny zavon-teny hoe ‘indizeny'?
Heveriko fa miseho amin'ny fampitam-baovao ny ‘indizeny’ satria mpandray anjara manan-danja izy ireo, kanefa mieritreritra aho fa mikasa ny ho mpandray anjara hita fotsiny izy ireo kanefa tsy mahatakatra ny zava-misy sy ny toe-javatra iainany.
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay nokarakaraina niaraka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fikambanana El Churo  any Quito, Ekoadaoro ny lahatsoratra. Nokarakarain'izy ireo ny atrikasa tamin'ny 21 aprily 2018 ary namoriana solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihana ny fomba hanehoana azy ireo na ny olana izay atrehany ao amin'ny angona media Ekoadaoreana sy ny famoronana tantara ho setrin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/05/120588/
 jereo ny sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/06/indigenaecnube.png